Naqshad kheyraad bilaash ah, bangiyada sawirka iyo astaamaha | Abuurista khadka tooska ah
download sawiro bilaash ah, astaamo, sawirro xallinta sare iyo sawirro, badiyaa waa ikhtiyaarka ay doortaan inta badan dadka bilaabaya adduunka qorista baloog, iyo sidoo kale kuwa go'aansaday inay ganacsigooda ku bilaabaan khadka tooska ah iyo kuwa naftooda u hura naqshadeynta garaafka "banaan".
Taasi waa sababta aysan muhiim u ahayn in la ogaado oo keliya kuwa ugu fiican bangiyada muuqaalka, laakiin sidoo kale waa lagama maarmaan in la ogaado sida arrinta oo dhan xuquuqda daabacaadda.
1 Faa'iidooyinka isticmaalka sawirada qaraarka sare
2 Maxay tahay sababta loo adeegsanayo bangiyada muuqaalka ee ka madax banaan xuquuqda lahaanshaha?
3 Waa maxay nidaamka sharciga ah ee loogu adeegsado sawirrada baraha bulshada?
4 Websaydhada ilaha ilaha sawirada
Faa'iidooyinka isticmaalka sawirada qaraarka sare
Sababta ugu weyn ee ay lagama maarmaan u tahay maal gasho sawirro tayo sare leh iyo runtii qalab indho qabad leh oo muuqaal ah, waa in waxaas oo dhami ay ku xirnaan doonaan oo keliya sawirkaaga shirkadeed, laakiin sidoo kale xirfaddaada. Taasi waa sababta, hoosta waxaan ku tusi doonaa qaar ka mid ah faa'iidooyinka ay sumaddaadu heli doonto haddii aad isticmaasho qalabka lacag bixinta ee noocan ah:
Waqti ayey ilaashadaan.
Waxay abuuraan kalsooni.
Waxay dib u xaqiijinayaan sawirka astaanta.
Waxay ula jeedaan lagu daro kala duwanaansho.
Midab iyo qiimo ayuu keenayaa waxyaabaha ku jira webka.
Waxay ku keenaan fayraska shabakadaha bulshada dhexdeeda.
Waxay kobciyaan kaqeybgalka shabakadaha bulshada.
Waxay soo jiitaan dareenka booqdayaasha cusub.
Waxay maareeyaan inay dhaqaajiyaan shanta dareen.
Waxay soo gudbiyaan waaya-aragnimada muuqaalka.
Waxay soo bandhigaan mowduucyada laga hadlayo.
Waxay hagaajinayaan isku-dhafka macluumaadka.
Waxay hagaajinayaan saamiga taraafikada webka.
Waxay kor u qaadaan muuqaalka khadka tooska ah iyo sidoo kale SEO.
Shaki la'aan, ha a buugga ballaaran ee sawirada iyo sawirada qaraar sare, macnaheedu maaha kharash, laakiin maalgashi weyn oo ku saabsan waxa loola jeedo sawirka xirfadlaha ah iyo sumadda waxaanan dhihi karnaa waa qalab kuu oggolaan doona inaad naftaada u qeexdo inay tahay astaan ku xoogan indhaha tartanka, macaamiisha hadda jirta iyo sidoo kale macaamiisha mustaqbalka, waxay sidoo kale noqon doontaa waxa lagu garto oo laguu kala sooco dadka kale.
Maxay tahay sababta loo adeegsanayo bangiyada muuqaalka ee ka madax banaan xuquuqda lahaanshaha?
Waqtiga aan helayo xoogaa wanaagsan sawirro lacag la'aan ah ama sawirroWaxaad asal ahaan leedahay seddex bedel:
U adeegso sawirrada xuquuqaha la saaray.
Soo qaado sawirada qaraarka sare naftaada.
Tag bangiyada sawirka ugu habboon.
Haddii aad doorato beddelka ugu dambeeya, maadaama laga yaabo inaadan haysan ilo ama aqoon aasaasi ah oo aad ku sawirto sawirrada qaarkood naftaada, waxay noqon kartaa in xaaladaha qaarkood aad ka shakiso caddaynta qaar ka mid ah sawirrada taas waxaa laga heli karaa internetka iyo haddii si dhab ah loo helo Xuquuqda daabacaadda waadna isticmaali kartaa.
Waa maxay nidaamka sharciga ah ee loogu adeegsado sawirrada baraha bulshada?
Adiga oo ku wadaagaya baraha bulshada qaar sawiro laga helay internetka, sharciyada guud ahaan wax yar ayaa loo oggol yahay, xitaa haddii sawirradu ay ka yimaaddaan degel leh xuquuq nuqul ama haddii qofka markii hore soo daabacay aanu lahayn rukhsadaha ku habboon, maxaa yeelay waxaa loo tixgeliyaa in waxyaabaha lagu wadaago shabakadaha bulshada badiyaa waa la aqbalaa si hadhow loogu qaybiyo hab dadweyne.
Si kastaba ha noqotee, tan hadda maahan sidan, haddii qofka ku daabacay sawirka mid ka mid ah astaamahooda bulsheed uu si gaar ah ama qaab xaddidan u sameeyay.
Xaaladdaas, dadka kale xaq uma laha inay la wadaagaan sawir la sheegay si xor ah, taas oo aan caadi ahaan ku soo noqnoqon shabakadaha bulshada dhexdeeda, maxaa yeelay xilligan waxa kiciya dadka markay sawir wadaagayaan waa inay si guud isu muujiyaan.
Websaydhada ilaha ilaha sawirada
Waxaad ka heli kartaa degello internet badan oo aad ku leedahay a buugga ballaaran ee ilaha garaafyada, sawirrada iyo sawirada Faylasha xallinta-sare ee gabi ahaanba ka madax bannaan boqortooyada.
Wadada buuxda ee maqaalka: Hal-abuurka internetka » Khayraadka » Naqshad kheyraad bilaash ah, bangiyada sawirka iyo astaamaha
Ku beddel midabka indhaha Photoshop
Barnaamijyada naqshadeynta? La kulan Adobe Spark